Mogadishu Journal » 2019 » March » 19
Mjournal :-Sarkaal ka tirsan ciidamada Booliska Soomaaliyeed gaar ahaan qeybta dambi barista CID ayaa ka badbaaday waxyaalaha qarxa oo loogu xirey gaarigiisa, hase yeeshee waxaa ka soo gaaray dhaawac.Sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay Xarbi Dhagay ayaa gaariga uu watay waxa uu...
Mjournal :-Qarax Gaari ayaa goordhaw ka dhacday Afaafta hore ee xarunta Dembi Baarista Ciidanka CID-da ee Magaalada Muqdisho. Gaari lagu xiray waxyaabaha qarxa ayaa halkaasi ku Qarxay ,iyadoona aan wali la xaqiijin in uu qaraxan sababay, Dhimasho iyo dhaawac.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo safarkiisii u horeeyay ku tagay dalka Qatar
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayay ayaa maanta gaaray magaalada Doxa ee dalka Qatar, kaddib markii uu martiqaad ka helay Amiirka Qatar. Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Doxa ku soo...
Degmada Xamar Weyne oo guddoomiye cusub yeelatay
Mjournal :-Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magalada Muqdisho Eng, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa degmada Xamarweyne waxa uu u Magacaabay guddoomiye Cusub. Wareegto kasoo baxday Xafiiska guddoomiyaha ayaa waxaa guddoomiyaha degmada Xamarweyne loogu Magacaabay...
Dowladda Soomaaliya oo ku baaqday in la joojiyo dagaal beelleedyada
Mjournal :-Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Dib u heshiisiinta iyo Arrimaha Federaalka dowladda Soomaaliya ayaa baaq ka soo saartay dagaalo ka dhacay deegaano ka tirsan Gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud. War saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda ayaa lagu sheegay in kaalin weyn...
Baaris lagu wado sababta keentay weerarkii Utrecht
Mjournal :-Mas’uuliyiinta dalka Netherlands ayaa weli isku dayaya inay go’aamiyaan sababta ka dambeysay toogasho shalay ka dhacday meel tareenada laga raaco oo ku taalla magaalada Utrecht. Toogashadaas ayaa waxaa ku dhintay saddex qof, ayada oo shan kale ay ku dhaawacmeen....
Mjournal :-Wararka ka imaanaya degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in Kooxdii Al-Shabaab ee xalay weerarka ku qabsaday degmadaas ay xalay xilli dambe isaga baxeen, iyadoo ciidamada dowladda ay dib ula wareegeen. Sida ay sheegayaan wararka Al-Shabaab ayaa...
Ciidanka Kenya oo isaga baxay deegaan muhiim ah iyo Al-Shabaab oo la wareegay
Mjournal :-Wararka laga helayo deegaanka Buusaar ee Gobolka Gedo ayaa waxa ay ku waramayaan in saakay waaberigii hore ay ciidamada Kenya isaga baxeen deegaankaas oo mudo dhowr sano ah ay ku sugnaayeen. Dadka deegaanka ayaa waxaa ay sheegeen in kaliya ay saakay arkeen Ciidamada...
Kheyre oo xalay ka qeybgalay kulan looga hadlayay dardargalinta is dhaxgalay bulshada iyo laamaha amniga
Mjournal :-Magalada Muqdisho waxaa xalay lagu qabtay munaasabad looga hadlayay dardar gelinta isdhexgalka Bulshada iyo Hay’adaha Amniga,kaas oo uu soo qaban qaabiyey Maamulka gobolka Banaadir oo uu guddoomiyaha ka yahay Cabdiraxmaan Cumar cismaan Yariisow. Kulanka ayaa waxaa ka...
Warar ugu danbeeyay weerar culus oo Al-shabaab ku qaadeen degmada Balcad
Mjournal :-Al-Shabaab ayaa xalay waxaa ay weerar dhowr jiho ah ku qaadeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya waxaana halkaasi ka dhacay dagaal mudo saacado ah qaatay. Al-Shabaab ayaa degmada Balcad xalay kasoo weeraray...